LXDE iyo Razor-Qt ayaa isku milmay | Laga soo bilaabo Linux
LXDE iyo Razor-Qt ayaa isku milmay
Waxay yihiin Link | | Aplicaciones
Dhowr ilbiriqsi ka hor iyada oo loo marayo Twitter (Waxaan ka hadlayaa markii aan bilaabay qoraalka) Waxaan maqlay wararka sheegaya in mashaariicda Lxde y Feeraha-Qt xoog ku biirin doonaa a hal mashruuc.
midowgu wuxuu bilaabay in la maareeyo ka dib markii lagu dhawaaqay LXDE si loogu wareejiyo mashruuca Qt, tan iyo inkasta oo Razor-Qt uu dhawaan soo saari doono nooc cusub oo xasilloon (0.6.0), horumarka guud ahaan hoos ayuu u dhacay.
Qorshuhu waa in la soo ururiyo waxa ugu fiican mashruuc kasta iyo deked kasta, ama laga soo qoro xoqida, wax kasta oo aad isticmaasho GTK, marka lagu daro hagaajinta mashruuca sida ugu macquulsan si ay ugu shaqeyn karto kumbuyuutaro tiro badan, kaliya ruuxda labada mashruuc iyo bixinta jawi bixiya khibrad weyn, marka lagu daro dhiirigelinta qof kasta oo xiiseynaya iskaashiga horumarintooda maadaama aysan noqon doonin wax sahlan oo waqti qaadan doonta.
Runtu waxay tahay inaan ku faraxsanahay warkan, maadaama aan jeclahay labada mashruucba (waad ogtahay inaan jeclahay jawiga iftiinka ah, runtiina waxaan isticmaalaa LXDE), waxaanan u malaynayaa in jawi aad u weyn soo bixi doono, awoodna u leh inuu qarxiyo miisaanka culus. (oo waligood sifiican looma dhihin 😉)
Maxay kula tahay
Jidka aan kaaga tago shaashadda LXDE-Qt ee aan maalmo kahor sameeyay:
source: Indha-indheyaha muuqaalka
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » LXDE iyo Razor-Qt ayaa isku milmay
42 faallooyin, ka tag taada
Shakhsi ahaan, RazorQT waa mashruuc aan jeclaa, laakiin xitaa sida uu u fiicnaa, waxaan ogaaday in horumarkiisu uu aad u gaabis ku saleysan yahay mashaariic kale. Shakhsi ahaan, waxaan u maleynayaa inay u wareejinayaan makiinadooda xasiloon QT5, ka dibna ay dhammeeyaan LXDEixarlo. Xaqiiqdii talaabadani waxay wax weyn ka tari laheyd horumarka mustaqbalka….
Waa maxay war wanaagsan. Sidoo kale aad ayaan u jeclahay desktops-yada fudud waxaanan Lubuntu ugu isticmaalaa mashiin. Waxaan rajeynayaa inaan dhowaan arko wax "qaab" leh
Waxaan u fiirsanayaa meesha loo yaqaan 'LXDE-Qt repos' (maadaama taasi ay tahay meesha wax walba la soo gelin doono) markaa isla marka aan bilaabo inaan arko wax cusub oo la tijaabin karo ugu yaraan waan soo ururin doonaa oo hubin doonaa, oo haddii loo baahdo, soo sheego, wixii aan soo bandhigo, iwm.
Waxaan isku dayay inaan soo ururiyo. Waan awooday inaan ururiyo libfm iyo pcmanfm-qt kaliya way fiicantahay, laakiin lxpanel-qt iyo lximage-qt wax aan macquul aheyn.
Dark Purple dijo
Warkan weyn. Mashaariicda kale ee ujeeddooyinka la mid ah waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan. Warkii aan aadka u jeclaa bilihii dhowaa.
«Mashaariicda kale ee ujeeddooyinka la mid ah waa inay fiiro gaar ah u yeeshaan» Gebi ahaanba waa la wada raacsan yahay 😀
war aad ufiican, qeexitaan kan ugufiican bilaha, waxaan kaxunyahay in ubuntu oo leh mirkeedu uusan isla wadadaas qaadin
Haa, runtu waxay tahay haa, labadaba amaan iyo dhahdo waan taageeri lahaa Wayland iyaguna waxay siinayaan dhabarka dambe
kuwa masuulka ka ah lubuntu horeyba waxay u sheegeen inaysan u tagi doonin inay eegaan. wuu ku sii socon doonaa xorg, iyadoo loo daayo mir sidii ikhtiyaari ahaan
Ku jawaab TheGuillox
Erayada Tannhausser waxay ila muuqdaan inaan soo koobo:
"Waxaan u maleynayaa in tani ay tahay war aad u wanaagsan, oo ah calaamad muujinaysa in bulshada barnaamijyada lacag la'aanta ah, oo ka baxsan kala qaybsanaanta dhaqankeena nalagu eedeeyay, ay awood u leedahay inay isu yimaadaan si ay u soo saaraan mashaariic runtii muhiim ah"
Shaashadda shaashadda waxay u egtahay daaqado leh astaamo aad u tiro badan oo dusha sare ka muuqda hahaha (kaftan uun, ha iga waalin)
Marka laga hadlayo wararka, waxaan aqriyay in isbeddelka ay sabab u tahay xaqiiqda ah in gtk2 aan hadda la horumarin oo xulashadu ay tahay gtk3 (isticmaalka badan) ama qt. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waan ku faraxsanahay inaan maqlo warka, sidaas darteed isbeddelku wuu sii dhakhso badnaan doonaa.
Haa, waa uun taas, ama waxay aadayaan GTK3 ama waxay aadayaan Qt4 maadaama tan dambe ay wali yeelanayso taageero halka GTK2 ay joojin doonto haysashadeeda waxyar.
Heerkaan waa inaan ku barto sameynta isdhexgalka Qt hoosta Python
Dhab ahaantii labadaba Gtk3 iyo Qt4 / Qt5 waxay kordhiyaan isticmaalka. Waxa dhacaya waa tan iyo markii ay u dhoofayaan maktabad cusub, waxay doorbidaan Qt maxaa yeelay horumarinteeda ayaa ka sahlan.
Way ila habboon tahay in QT4 ay weydiisato ilo ka badan inta GTK3 weydiiso, laakiin way ka sahlan tahay barnaamijka iyo dib-u-isticmaalka koodhka QT, waa sababta ay u doortaan QT inay horumariso.
Isku biiriddu had iyo jeer way kafiican yihiin, waxaan rajeynayaa natiijada ugu dambeysa ee isku biirkan inuu igu qancin doono inaan u wareego Qt (wax walbana way ka qurux badan yihiin Qt).
War wanaagsan. Taasi waxay yareynaysaa kala-jajabka xoogaa waxayna isku dubarideysaa dadaallada hal jiho. Toddobaadkan wuxuu horey u soo maray Aynu isticmaalno Linux iyo kan Linux.
Ku jawaab Axad
Shaki la'aan war wanaagsan 😀
Waxaan arkaa warkan waxaanan u malaynayaa yaa adeegsada boqolkiiba 99kan daaqad ayuu isticmaalaa midka kalena wuxuu u qaybsan yahay 1000 linux distro jirta taas oo ah in software-ka Linux ku guuldareystay inuu noolaado sfw lahaanshaha
Ku jawaab adrian
mid kale dijo
Oh kuwan kooxi caajis ah!
Ka jawaab dadka kale
Haa, waad ku mahadsan tahay software-ka lahaanshaha iyo mashiinkooda dacaayadaha waxaan u dhimanay sidaada oo kale tiro badan. Marka waxaan dareemi karnaa inay ka sarreeyaan.
Miyay software-ka macaamiisha ahi kuu shaqeeyaa? Aad ayaan u faraxsanahay, inkasta oo ayna aniga aniga ii badnayn, barnaamijyada bilaashka ahi aniga way ii shaqeeyaan
Ku jawaab ed
Hagaag, markasta oo aad gasho oo aad isticmaasho Facebook, Google ama Wikipedia, waxaad ugu mahadcelineysaa softiweer bilaash ah, maxaa yeelay dhammaan server-yada bogaggaasi waxay ka shaqeeyaan Linux. GUJI !! 😀
ugu jinsi badan dijo
Hagaag, waxaad ku bixisay jacaylka waxaad ku maalgashan kartaa qaar ka mid ah fasalo qoraal oo aad runtii ubaahantahay, Adrián. XD
Ku jawaab massexy
Wax walba waxay umuuqdaan in Qt uu yahay mid fudud.
Jawaab Juan Camilo
Ahaanshaha waxoogaa OT ah, waxay umuuqataa in Linux 3.11 iyo nooca cusub ee MESA ay jiraan waxyaabo kadis ah oo farxad leh oo kuweena isticmaala nouveau iyo radeon, oo ay weheliyaan Gallium3D, ciyaartoydeena gudaha ayaa hubaal ka mahadcelin doona 😀
Waxay sidoo kale timaadaa tooska tooska ah
Direct3D 9, 10/11 waxay in mudo ahba hooyo ahayd, iyo hagaajinta nouveau iyo radeon darawallada DRM, iyo waliba taageerada VP2 / h264 dardargelinta qalabka, runtii horumar fiican improvements
warka tooska ah ee tooska ahi waa tan iyo sanadkii 2010, laakiin uma muuqato in wali lafuliyay miiska wadaha miiska, ilaa iyo hada mashruucu wuu soo shaac baxay
Horumarku waa mid tijaabo ah xilligan, waxaa loo isticmaali karaa oo keliya haddii ay disto-gaagu soo uruuriso astaamahaas, ama aad ka qaadato isha oo aad isku ururiso naftaada. In Arch waxaan fursad u helay inaan tijaabiyo, runtiina sifiican ayey uga shaqeysay cayaaraha sida Starcraft II iyo Diablo 3, waxqabadka wax badan ayaa soo hagaagay iyadoo la adeegsanayo Khamriga.
Eliiyaah 174 dijo
Tani waxay noqon doontaa isugeyn weyn, waxay umuuqataa inaan katagayo KDE hahaha ...
Waxaan u maleynayaa in tani ay tahay war aad u fiican, aad ayey ugufiican tahay labadan mashruuc ee iskusoo wada duuboo.
Way fiicantahay in XFCE iyo E17 ay isku mid sameeyeen.
Ku jawaab Curefox
Wuu ila fiican yahay aniga maxaa yeelay LXDE iyo Razor ayaa waqtigaas aniga igu farxay, laakiin wakhti dheer bay fadhiyeen oo kaliya waxay ku hormarayaan iyaga oo qulqulaya, si loo arko haddii ay hadda si dhab ah u socdaan
Kaliya waxaan ku tijaabinayaa Sparky Linux (tijaabada Debian) Razor QT runti waan ku riyaaqayaa. Sidoo kale LXDE waxay ila tahay mid aad iigufiican. Waxaan rajeyneynaa isku dhafku inuu soo saaro waxa ugu fiican labada dadaal.
Hagaag, runtu waxay tahay inay aad ufiican tahay in mashaariicda laxiriira ay ku biiraan xoogaga. Maxaa ka fiican tusaale ahaan Linux iyo Aynu Isticmaalno Linux ..
Waxaan rajeynayaa inaan arko horumar waxaanan isku dayi doonaa inaan wax iska kaashado.
Aniguna sidaas oo kale ayaan leeyahay. Waa wax la yaab leh natiijooyinka la helo markii dadaalladu midoobaan.
Go'aanka ah in la isku daro labada mashruuc waa mid aad u fiican, maadaama Razor-QT uu ka caawin karo QT iyo LXDE iswaafajinta, waxqabadka jawiga desktop.
Oh, habka, mawduuca LXDE ee aad leedahay waa weyn yahay. Waxay i xasuusinaysaa XFCE.
Tani waa inay ku dhacdaa mashaariic badan. Midow ku milmaan.
Sugaya in la arko waxa foornada uun soo bixi doonta ...
Qiyaas intee le'eg ayay qaadanaysaa in la isku diyaariyaa? Gacmahaygu way gubanayaan si aan u caddeeyo.
Waan jeclahay LXDE, waxaan ku isticmaalaa Fedora.
Faahfaahinta boostada: sadarka hore faaska ayaa la waayey: «way qudhuntay» (waa qaabka falka ee kaabayaasha la haysto)
Waan iska indhatiray.
Waad ku mahadsantahay digniinta
Waxaan kaliya rajaynayaa inaysan la mid ahayn kde, waan ogahay in kuwa badani ay jecel yihiin kde, laakiin anigu ma jecli aad iyo aad baan u rajaynayaa mana u ekaato ama ma laha astaamo isku mid ah,
Laakiin runtii waan ka door biday lxde gtk3 wax ka badan maxaa yeelay codsiyada badankood waxaa lagu sameeyaa gtk kuwa kde ama qt waa gooni, in kasta oo aan had iyo jeer helay xaqiiqda ah in gtk uusan 100% la jaan qaadi karin qt iyo tan kale.
Horey waan u ogahay in codsiyada gtk ay ka shaqeeyaan kde iyo codsiyada qt ee gnome, laakiin had iyo jeer waa in la waafajiyaa oo had iyo jeer uma muuqdaan kuwo wanaagsan, waxaan xasuustaa inaysan waqti badan qaadan markii aan isku dayay kde oo aan rakibo 1 codsi gtk, way shaqeysay laakiin waxay umuuqatay inaan isticmaalay mawduuca caadiga ah Windows, waxaan kaliya rajaynayaa in lxde uu la mid yahay had iyo jeer, waxa kaliya ee aan jeclaan lahaa inaan badalo waa mawduuca asalka ah, maxaa yeelay muuqaalka gtk2 waa wax laga naxo waxaana rajaynayaa in marka lxde-qt la bilaabo inay yeelan doonto muuqaal ka fiican, sida Dadku waxay isku qaldaan waxqabadka wanaagsan iyo fool xumada, ma dhahayo waxay leedahay hufnaan ama dhalaal ama wax shaati ah, laakiin guud ahaan waxyaabaha isticmaalka hooseeya waa kuwo fool xun mana fahmin sababta ay sidaas ku noqon karto haddii ay lahaan karto muuqaal wanaagsan Isla kuwa abuuray mawduuca asalka ah taasna ma kordhin doonto isticmaalka kheyraadka kaliya si ay ugu ekaato mid hagaagsan, sidoo kale taasi waxay noqoneysaa oo ha u qaadin si qaldan haddii aan dhaho wax uusan qofna jeclayn, u qaado wax ka badan wax kasta oo ah aragtidayda shaqsiyadeed maxaa yeelay taasi waa waxa aan ku idhaahdo faaladan
Ku jawaab aleexfrost
Muuqaalka cusub: Akhristuhu waa daabacaha, waxa ku jira waa lacag la'aan
ciyaarta dhimatay ee socota